ရင်နင့်ကြွေ (7) — Steemit
ဒေါ်မိုးမိုး တစ်ယောက် မနက်ခင်းရောက်တာနဲ့ ဘာလုပ်လို့ ဘာကိုင်ရမည်မသိ ဖြစ်နေတော့ တဘတ်လေး ခေါင်းပေါ်တင်ပြီး ရွာထဲက နတ်ကတော်ထံ ထွက်လာ ခဲ့လေတော့သည်။ နတ်ကတော်ထံ အကျိုးအကြောင်း ပြောပြ မေးမြန်းကြည့်ရလေသည်။ နတ်ကတော်မှ ခေတ္တအာရုံခံပြီးနောက်..
"သမီးတော်ကြီး နင့်သမီးက ယောက်ျားလေး တစ်ယောက်နဲ့မက ထွက်သွားတာပဲ အဲ့ ဒီယောက်ျားလေးက သူ့အပေါ် မေတ္တာ မစစ်ဘူးဟဲ့ ပြန်လာပါလိမ့်မယ် စိတ်မပူနဲ့ ဟုတ်ပီလား သူ့မွေးလ မကျော်မချင်း ဘယ်မှ ခရီး မသွားရဘူး ပြောထားတာ နားမထောင်ပါ့ဘဲ သမီးတော်ကြီး... သောကတွေ များနေရတယ် ကံတရား လို့သာမှတ် သမီးတော်ကြီး ....”
ဒေါ်မိုးမိုး အနည်းငယ် စိတ်သက်သာရာရပြီးနောက် အနည်းငယ် စကားပြောဆိုပြီး အိမ်ပြန်လာခဲ့လေတော့သည်။
ပထမတစ်ခါ သွားတုံးက ဌေးဌေးဦးပါ ပါသဖြင့် မေးမြန်းဖူးသည်။ ထိုအခါတုံးက ဌေးဌေးဦးအား မွေးလမကျော်မချင်း ဘယ်မှ မသွားရန်နှင့် ကံညံ့နေကြောင်း ပြောခဲ့ဖူးသည်။ ယခု သမီးသည် ဘယ်သို့ထွက်သွားသည်မသိ။ မိမိဆူပြောသည်ကလည်း အိမ်က ထွက်သွားရလောက်အောင် ရင့်ရင့်သည်းသည်း မပြောခဲ့ပေ။ ဒေါ်မိုးမိုးတစ်ယောက် သမီးအား စိတ်ပူလိုက်၊ ဒေါသတွေဖြစ်လိုက်နှင့်သာ တစ်နေ့လုံး ထမင်းလည်း မစားနိုင်ခဲ့ပေ။
သမီးဖုန်းအား မကြာခဏ ခေါ်ကြည့်ရင်းသာ အချိန်ကုန်လေသည်။ ခေါ်ကြည့်တိုင်းလဲ ဖုန်းလေးက စက်ပိတ်ထားပါတယ် ဟုသာ ဖြေလေတော့သည်။ သမီးကို နတ်ကတော်ကလဲ ပြန်လာမှာပါဟုပြောသဖြင့် ဘယ်ချိန် မိမိအား ဖုန်းဆက်မလဲ မျှော်ရင်း ဖုန်းလေးအား မိမိအနားသာ သွားလေရာ ယူသွားမိလေသည်။
နောက်တစ်ရက် တနင်္လာ နေ့မလို့ အလုပ်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ ညဆင်းမလို့ နေခင်း၂ခွဲမှ အလုပ်ဝင်ရမည်။ မနက်ခင်းဖက်တွင်လည်း နေမထိ ထိုင်မသာ ဖြစ်နေရသဖြင့် တဘက်လေး ခေါင်းပေါ်တင်လျှက် နတ်ကတော်ထံ ထွက်ခဲ့ရပြန်သည်။
နတ်ကတော်ကလည်း သူ့ကို မြင်မြင်ချင်း ပြောလေသည်။
"မိုးမိုးရယ် ငါမနေ့ညက ဌေးဌေးဦးကို စိတ်ပူလို့ အာရုံခံကြည့်တော့ ဌေးဌေးဦးကို မြစ်တစ်ဖက်ကမ်းတွင် တစ်ဝဲလည်လည်ဖြစ်နေတယ်အေ့ ငါအဲ့လိုမြင်ရတာ သူ့အတွက် နမိတ်မကောင်းဘူး ”
ဟု ပြောသဖြင့် ဒေါ်မိုးမိုး နေရာတွင် ချုံးပွဲချ ငိုမိပြန်သည်။ နတ်ကတော်မှ ဆက်၍
"မိုးမိုးရယ် မငိုပါနဲ့ ငါ အန္တရာယ် ကင်းအောင် ဆုတောင်းပေးခဲ့ပါတယ်အေ ညည်းအရမ်း စိတ်မပူပါနဲ့ ပြန်လာမှာပါအေ့...”
ဒေါ်မိုးမိုးတစ်ယောက် သမီးအား သူမနှစ်သက်သော ယောက်ျားကောင်းလေးနှင့်သာ တွေ့ဆုံ အိမိထောင်ကျစေချင်ခဲ့သည်။ ယခု မိမိသမီး လုပ်ပုံက သူ့ရည်းစားက မည်သူဟုပင် မိမိ မသိရပေ။ ကျန် သမီးနှင့် အလုပ်အတူလုပ်နေသူများလည်း မသိကြပေ။ မိမိသမီး မည်သည့်အတွက်ကြောင့် မြစ်တစ်ဘက်ကမ်းသို့ ရောက်နေရပါသလဲ စဉ်းစားမရပေ။ မိမိသမီးအား ထိုခေါ်သွားသူများက ရောင်းစားကြလျှင် .....မိမိ တစ်ကိုယ်တည်း စဉ်းစားရင်း သမီးအတွက် သောကပွေလျှက် ငိုကြွေးချင်းသာ အဖော်ဖြစ်နေရလေတော့သည်။ သမီးပျောက်သွားကြောင်းလည်း မည်သူ့မှ မပြောဖြစ်ပေ။ သမီးရေ..အမေစိတ်ပူနေရတယ် ဘာပဲ ဖြစ်နေနေ အမေ့ဆီသာ ပြန်လာပါတော့ဟုသာ အော်ဟစ် ပစ်လိုက်ချင်တော့သည်။
Congratulations @kyi ! You receiveda0.74% upvote from @kryptoniabot & @kryptonia for your task of 20 SUP Today.
အားပေးနေတယ် မယ်ကြည်ရေ နောက်တစ်ပိုင်းလေး မြန်မမြန်ရေးပါ
ရေးထားတေ တင်မေ စုရေ😍
မိဘနှင့် သားသမီးကြား နားလည်မှုလေးထားစေချင်
Really ပါ ယွန်းရေ😞
ဟုတ်ပါ့ မိဘကို စိတ်ပူအောင်လုပ်တယ်😞
အဲ့ဒီ့အပူက ဘာနဲ့မှကို နှိုင်းရမှာမဟုတ်ဘူး ... အမေဖြစ်သူကို သနားလိုက်တာ ...
ဟုတ်ပါ့ ညီမရေ.. ရင်နဲ့ မွေးရတဲ့ သားသမီးတွေပါလေ😊
သမီးလေး ပြန်လာရဲ့လား လာမှာပါနော့ ။
နတ်ကတော်ကြီးကလည်း တခါတည်း အရောက်ခေါ်ပေးတာ ဟုတ်ဘူး... မအေ စိတ်ပူနေတာကို😁
ဟယ်အေ 😁😁 ရွာဓလေ့အရ နတ်ယုံကြည်မူ့ပါ ထည့်ရေးပြထားတာပါ😊
အမေဖြစ်သူ ဒေါ်မိုးမိုးကတော့ စိတ်သောကရောက်ပြီး ဗျာများနေရပြီပေါ့။စိတ်ဝင်စားစရာ ဖြစ်ရပ်မှန်လေးပါ။ဆက်အားပေးပါ့မယ်။
စိတ်ပူစရာတော့ဖြစ်လာတယ် မိဘတွေကို ကိုယ်ချင်းစာမိပါတယ်လေ အချိန်တန်လို့ အိမ်ပြန်မလာရင်တောင် လည်တဆန့်ဆန့်နဲ့ မျှော်နေတတ်တာ သားသမီးတွေ ကိုယ်တိုင် မိဘဖြစ်မှ သိကြပါလိမ့်မယ်
ဟုတ်ပါတယ် ဥစိုး ရင်နှင့်မွေးထားရတာမလား
မမက ပိုသနားမိတေ ခေး😞
အန်တီမိုးသမီးတစ်ခုခုများ ဖြစ်သွားပြီလားဗျာ မမ
အာ့​တွေ ခက်​တယ်​ မမ​ရေ သမီး​မွေးထားရတာ ​တော်​​သေး ကိုယ်​က သား​လေး​မွေးထားလို့ 😁😁
နောက်ထက် ယူအုံး သမီးတိုင်း ဆိုးကြတာ မဟုတ် မတ်မတ်ဆို လိမ္မာတေလေ😁
ဌေးဌေးဦးရယ် ကိုယ်အမေကို မသနားတော့ဘူးလား